Magacyada wafti ka tagey Muqdisho oo GAROOWE u tagay wada-hadallo (Aqri) - Caasimada Online
Home Warar Magacyada wafti ka tagey Muqdisho oo GAROOWE u tagay wada-hadallo (Aqri)
Magacyada wafti ka tagey Muqdisho oo GAROOWE u tagay wada-hadallo (Aqri)
Muqdisho (Caasimadda Online) – Qaar ka mida xildhibaanada Aqalka sare ee loo xilsaaray xalinta khilaafka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda dhaxe ayaa gaaray magaalada Garowe.
Xubnahani xalinta khilaafaadka labada dhinac ayaa waxaa lagu wadaa in ay la kulmaan Madaxda Puntland taasi oo qayb ka ah dadaalka dhexdhaxaadinta labada dhinac.
“Waxaan u babac dhigi karin oo dalka yaalla ma jiro,waxa nooga aadan ee uu dastuurku noo ogol yahay oo danta dalka ay ku jirto dhinac walba ha ahaatee waan u babac dhigi karnaa waana ka adagnahay” ayuu yiri Mr Faroole.
Sanatar Cabdi Raxmaan Maxamad Maxamuud Faroole ayaa sidoo kale xusay in marka ay howshooda u soo dhamaato ay warbixin buuxda u gudbin doonaan aqalka sare si go’aan looga gaaro.
Khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhaxe ayaa soo ifbaxay ka dib markii ay madaxda maamul goboleedyada oo shirk u yeeshay Kismaayo ay sheegeen in ay xiriirkii u jareen dowladda dhexe.